Quiche leh salmon, broccoli iyo farmaajo | Bezzia
Salmon, broccoli iyo jiiska riyaha
Maria vazquez | 05/10/2021 10:00 | Saladyada iyo khudradda, Pescado
Bezzia runtii waxaan jecelahay Quichés. Yihiin Xirmooyinka shaashadda Waxaan u aragnaa inay yihiin beddel weyn oo bilawga ah markaan martinno, laakiin sidoo kale waa saxan weyn oo aad u wanaagsan oo la wadaago maalin kasta oo toddobaadka ah. Kuwaas oo aan isku daynay tan salmon, broccoli iyo quiche farmaajo waa kan aan ugu jeclahay.
Qashinka aqbalo buuxiyo badan, sidaa darteed way ku qumman yihiin inay ka faa'iidaystaan ​​haraagaas aan ku hayno qaboojiyaha. Xaaladdan, salmon cusub, broccoli iyo jiiska ariga ayaa ah waxyaabaha ugu muhiimsan. Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale diyaarinnay cajiinka guriga.
Cajiinka for quiche ah Aad bay u fududahay in la diyaariyo laakiin haddii aadan haysan waqti aad ku samayso ama aad doorbidayso beddel ku habboon ama ka dhakhso badan, waxaad ku qamaaran kartaa dariiq ganacsi oo gaaban ama cajiinka cajiinka. Ma dhihi karno natiijadu waa isku mid laakiin si isku mid ah ayay u wanaagsan tahay.
150 g bur oo bur ah
75g subag qabow
1 jeex, la jarjarey
1/2 basal yar, shiidan
2 xabo oo toon ah, shiidan
180 g. broccoli ee ubaxyada
80 g. jiis jiis
280 g. salmon cusub oo la jarjaray
5 xabo oo farmaajo ah
190 ml. kareemka karinta
190 ml. caano dhan
Isku qas bur iyo subag baaquli ku jira galay xabadaha oo ku shaqee, ha ahaato walaaq ama gacmahaaga, oo cajiinka ku jiid, ilaa aad ka hesho ciid joogta ah.
Kadib ukunta ku dar, xilli oo ku dar laba qaado oo biyo ah. Isku qas sida lagama maarmaanka u ah in la isku daro maaddooyinka oo la sameeyo kubad.
Marka la gaaro, cajiinka ku rid qaboojiyaha oo ha fadhiisto saacad.
Halka, karkari bŕocoli 4 daqiiqo biyo badan oo cusbo leh. Waqti ka dib, si fiican u daadi oo kaydso.
Kadib digsi digsi oo leh 1 qaado oo saliid saytuun ah leek iyo basasha 5 daqiiqo.
Kadib ku dar broccoli iyo toon oo isku kari ilaa dhowr daqiiqadood oo dheeraad ah. Markaad samayso, digsiga ka qaad dabka oo kaydso.
Kuleyli foornada ilaa 180ºC.
Duub cajiinka oo ku dheji caag wareeg ah oo dhererkiisu yahay 26 cm dhexroor ama mid dheer oo ah 36 × 13 oo leh saldhig laga saari karo.
Kadib salka ku mud fargeeto, dushiisa ku rid warqad xaashi ah oo ka buuxi kubadaha dubista ama khudaarta.
Dubo salka inta lagu jiro 15 daqiiqo.
Ka faa'iideyso waqtigaas ku garaac ukunta kareemka, caano iyo qanjaruufo cusbo, basbaas iyo lowska.
15 daqiiqo kadib caaryada ka saar foornada oo ka saar kubadaha ama khudaarta iyo warqadda labadaba.
Ku rid farmaajada jiiska salka oo ku dul fidi isku darkii broccoli ee aad keydsatay, salmon cusub oo la jarjaray iyo farmaajo riyaha.
Dhammaad, ku shub isku dar ah karbaash.
Dub 30 daqiiqo ama ilaa cidhifyadu dahab yihiin. Oo marka la dhammeeyo, si taxaddar leh uga saar caaryada.
U adeegso salmon, broccoli iyo jiiska ariga quiche diiran ama diirran.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Recipes » Pescado » Salmon, broccoli iyo jiiska riyaha
Ka soo hel weelka roodhida guriga Zara
Masayrka iyo xasadka lamaanaha